Pro Trader Nhengo neMultiputa -Mwedzi Zvikwereti
Forex Kutengesa Kamuri
Tarisa, dzidza uye ubatsirwe pamwe chete mumba medu yekutengesa
Pasi apa Zvirongwa zvemitengo yedu Pro Trader Nhengo kwaunowana mukana kune yedu isina kufananidzwa Kamuri Yekutengesa iyo inoratidzira akawanda ezuva nezuva ehupenyu hova zuva rese kubva kune edu maTechnical vaongorori, ichipa yakakwira mikana yekutengesa mazano. Iwe zvakare uchave nekugona kuzere kune raibhurari yedu yeEvideo mavhidhiyo kukudzidzisa iwe nezve Smart Mari kutengesa, uye pro yekutengesa maturusi ayo mutengesi wese anoda kuti abudirire mukutengesa Forex.
Iyo Pro Trader Nhengo ndiko uko vatengesi vezuva vanouya kuzotengesa kwavo kune next level, zvisinei hazvo ruzivo rwako rwekuyera. Iwe unofanirwa kufunga kujoina isu kana iwe uchizvitenda wega kuti uve mumwe weanotevera:
Iwe hauna zvishoma ruzivo uye iwe unotarisa kuti utange kutengesa. Kana kuti zvimwe iwe uri mutsva uye uchiri kufunga zvinhu kunze. Isu tichakudzidzisa iyo Forex basics kubva kuA kuenda kuZ, kubva pamavambo ekutanga neasina njodzi Demo account uye kutora yako yekutanga bhizinesi zano kuti iwe ugadzirire iyo mhenyu account.
Wanga uchitengesa (kana kuyedza kutengesa) kwemwedzi 3-12, kana pamwe zvakareba. Iwe uchiri kutsvaga yakanaka yekutengesa nzira iyo inokushandira iwe. Isu tinokudzidzisa maitiro ekuvandudza yako zano uchishandisa nzira yehunyanzvi kumisika, maitiro ekushandisa manejimendi manejimendi, uye chengetedza yakanaka yekutengesa psychology.
Iwe une 1-3 makore ekutengesa ruzivo. Nekudaro, iwe hausati wawana chaiyo yekutengesa pamucheto uye ugare uchibatsira nemaitiro ako. Isu tinokubatsira iwe kupaza kuburikidza ne rollercoaster kutenderera kwekukwira nekudzika uye uve mutengesi unobatsira uchishandisa kurira kwenjodzi manejimendi, uye zano-rakavakirwa zano.
Wakatowana kugadzikana uye purofiti semushambadziri. Zvichida iwe urikutsvaga sosi yakavimbika yeakakwira mikana yekutengesa mazano uye kutangisa setups kubatsira kukuchengetedza nguva pane chati, kana, kuti uwane pfungwa inopesana pane yako wega yekutengesa ongororo. Pfungwa huru dzinowanzo funga zvakafanana (kana zvakasiyana) saka ngatitangei pamwe chete!
Ongorora # vhiki nevhiki-purogiramu chiteshi muDiscord yedu patinoenda LIVE!
Bata nesu pasocial media: https://myurls.bio/theforexlens